कुन राम्रो नर्मल डेलिभरी र सिजेरियन डेलिभरीमा ? - ज्ञानविज्ञान
गर्भवतीले प्रसव पीडाका डरले सिजेरियन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जुन गलत हो । कतिपयमा नर्मल डेलिभरी गर्दा यौन आनन्दमा असर गर्छ भन्ने भ्रम पनि छ । त्यो कथाचित सत्य होइन । बच्चा जन्मे पछि केहि समयमा यौनाङ पूर्णत पहिलेकै रुपमा आउँछ । त्यो भ्रमले अपे्रसन गराउनु राम्रो हँुदैन । तर अवश्यकता अनुसार शल्यक्रिया भने गर्नुपर्छ । नत्र आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । शल्यक्रियापछि सोही अनुरुपको खानपानले आमालाई छिट्टै सन्चो बनाउँछ ।
सिजेरियन सेक्सन पनि दुई प्रकारका छन् । आकस्मिक र ऐच्छिक । ऐच्छिकमा बच्चा जन्मिनु अघि तर समय पुगि सकेको अवस्थामा आमाको पेट चिरेर बच्चा निकालिन्छ । यसो गर्दा आमामा तनाव र पीडा कम हुन्छ । आमालाई सबै कुराको तयारी गर्न र मानसिक रुपमा तयारी हुन प्रर्याप्त समय पनि हुन्छ । अर्काे आकास्मिक सिजेरिय विधि हो । यो विधिको प्रयोग गर्भमा भएको शिशुलाई अप्ठयारो परेको खण्डमा या आमालाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा गरिन्छ । शिशुको मुटुको धड्कन कम वा बढी हँुदा, तौल धेरै हुँदा, प्रसवको समय चाहिने भन्दा बढी भएमा, आमालाई गाह्रो पर्दा वा कुनै जटिल रोग हुँदा गरिन्छ । आकस्मिक सिजेरियन गर्दा आमालाई बेहोश बनाइन्छ । पूर्णत बेहोस नगराई पेटदेखि तल्लो भाग मात्रै बेहोश बनाउने गरिन्छ । आमाले बच्चा निस्केको हेर्न सक्छिन ।
Topics #डेलिभरी #सिजेरियन
Don't Miss it इन्स्टाग्रामले युवाको मानसिक स्वास्थ्य बिगार्छ
Up Next चाडै थकाई लाग्नुका कारण र त्यसको समधान
दाँत सिरिंग भएर दुख्छ ? त्यसो भए अब यी उपाय अपनाएर सजिलै छुटकारा पाउनुहोस्
स्वस्थ जीवन यापनका लागि शरीरका अन्य अंग जस्तै दाँत पनि स्वस्थ हुनु जरूरी छ । दाँत पहेंलो वा खराब देखियो…